Ahụmahụ Semalt: Achọrọ Ịda Mkpa Iji Cyber ​​Fraudsters? - Enwetụbeghị Ihe A Nke A!
Site na oge, Intanet emeela ka ndụ anyị dị mfe. Ihe niile dị ugbu adị na intaneti, anyị enweghị ike igbochi onwe anyị ịnweta ọtụtụ ọnụọgụ ngwaahịa na ọrụ. N'otu oge ahụ, ọ bụ eziokwu naọnụ ọgụgụ ntanetị na ntanetị na-emewanyewanye.
Ross Barber, onye na-akwado ahịa ahịa nke Ọkachamara ,ekwuwo na na ọnọdụ ndị dị otú a, ọ gaghị enwe ike ịnọ na nchekwa n'enweghị ike iburu n'uche ihe ndị a:
A na-akpọkwa izu ohi dị ka "Fraud Identity". Nke ahụ bụ mpụ nkeonye nlekota oru na-anwa inweta ozi nkeonwe gị site na iji weebụsaịtị ma ọ bụ ozi ịntanetị. O nwere ike ịnweta nọmba nchekwa gị, akwụmụgwọnkọwa klas, na nọmba ikike ịkwọ ụgbọala. Ozugbo ọ na - enweta ozi gị, enwere ike iji ya zụrụ ihe na - akwadoghị, ị ga - achọkwaga-akwụ ụgwọ ahụ n'akpa uwe gị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji gbochie onwe gị pụọ na nzigharị dị otú ahụ ma ghara ịkekọrịta gị dị nroozi na onye ọ bụla na Intanet. Enwere ike ịchọpụta ndị na-agba ọsọ ma ọ bụ scammers ma ọ bụrụ na i jighị ozi ịntanetị amaghi, oku ekwentịma ọ bụ ozi. Ọ dịkwa mkpa ka ị ghara ịkọrọ onye ọ bụla amaghi ama gị akụ..
Ụgha ego ọganihu
Ụgha isi ahia nke mbu bụ otu n'ime ụdị scams kachasị mma. Ọ bụgụnyere ịkwado ndị ahụ metụtara ahụ nnukwu òkè nke nnukwu ego, na nkwụghachi ụgwọ maka obere ego ịkwụ ụgwọ. Ndị mmadụ na-esi n'ụzọ dị mfendị omempụ ka ha na-achọ ịkpata ihe na obere oge. Ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ, ọ ga-enwe ohere na onye nlekota ga-apụ n'anya gịego, ma ị gaghị enweta azịza site n'aka ha. Ụgha a na-amalitekarị site n'ịkpọtụrụ onye ọ bụla site na email, mgbasa ozi mmadụmkpokọta ma ọ bụ WhatsApp. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-arịọ gị ka ị kwụọ ụgwọ n'ihu, ị gaghị enweta ọnyà site na ụdị aghụghọ dịka ọ ga-abụ onye nlekota.Ụlọ ọrụ ndị a ma ama na ndị na-ere ahịa adịghị agwa ndị ahịa ha ka ha kwụọ ụgwọ tupu oge eruo.
Egwuregwu ego kaadị
Ndị mmadụ nọ na United States na Canada nwere ndị kaadị akwụmụgwọscams. Ụdị aghụghọ a na-agụnye kaadị ịkwụ ụgwọ dịka kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ dị ka isi iyi nke azụmahịa ahụ. Ndị omekome nwere ike ịjụị na-ekekọrịta nkọwa kaadị akwụmụgwọ gị site na email ma ọ bụ njikọ weebụsaịtị. Ọ dị mkpa na ị na-echekwa ozi gị ma ghara ịkekọrịta yana ndị ọzọ na ịntanetị. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ nke kaadị akwụmụgwọ na-ejedebe nanị pasent ole na ole, nke a nwere ike ime ka nnukwuAkwụghị ụgwọ ego dị ka azụmahịa aghụghọ. N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ihe karịrị pasent iri abụọ ndị America furu efuego n'ihi ego aghụghọ kaadị akwụmụgwọ. Ndị mmadụ nọ na United Kingdom furu efu karịa $ 500 na afọ gara aga n'ihi ụdị nke ojoro a.
Ọ bụrụ naadị gị furu efu ma ọ bụ na ezuru ya, ị ghaghị ịgakwuru gị nọ nsoụlọ akụ ka ọ kpọchie ya. E nwere ohere na ndị na-agba ọsọ ga-eji kaadị akwụmụgwọ gị emekọrịta ihe pụrụ iche Source .